नेपाललाई शैक्षिक हव बनाउन सकिन्छ - Karobar National Economic Daily
नेपाललाई शैक्षिक हव बनाउन सकिन्छ
query_builderSeptember 18, 2017 12:42 PM supervisor_accountराजन कँडेल visibility1440
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत द ब्रिटिस कलेज
चितवनमा जन्मेर त्यहीँ हुर्केका राजन कँडेल बेलायतमा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि चुप लागेर बसेनन् । विदेशमै राम्रो जागिर पाउन सक्ने योग्यता भएका कँडेल विदेश पलायन हुनुको सट्टा नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्वदेश फर्किए । १८ वर्षको उमेरमै सन् १९९९ मा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बेलायत गएका उनी त्यहाँ अन्य नेपाली विद्यार्थीसरह कामसँगसँगै अध्ययन गर्दै त्यहाँबाट डिग्री लिए ।
बेलायतबाट एजुकेसनमा एमबीए गरेका उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कलेजको आवश्यकता सम्झेर बेलायतकै विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनमा काठमाडौंमा ब्रिटिस कलेज स्थापनामा योगदान गरे । २००६ मा लन्डनमा एक कलेजको स्थापना गरेका उनले आफ्नो ज्ञान र अनुभवका आधारमा २०१२ मा नेपालमा द ब्रिटिस कलेजको सुरुवात गरे ।
विशेष गरी नेपालको शिक्षालाई विदेशमा मान्यता नदिने गरेको तीतो अनुभव गरेका उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था खोल्ने योजनामा सहयोग गरेका छन् । द ब्रिटिस कलेजका कार्यकारी अधिकृत कँडेलसँग नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर र त्यसको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामलगायतका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री लिन अभैm पनि नेपाली विद्यार्थी विदेश नै जानुपरेको छ । के नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्था नभएर हो ?
यसमा मेरो विचारमा एक्प्रोजर लिन नेपाली विद्यार्थीले विदेश जानुपर्छ भन्ने हो, तर त्यसका लागि यहाँबाट लाखांै रुपैयाँ खर्च गरेर जाँदा महँगो हुन्छ । ब्याचलर तहको अध्ययनका लागि प्रतिवर्ष नै २० लाखसम्म खर्च गर्नुपर्छ । विदेशमा ब्याचलर लेभलको पढाइ चार वर्षको हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपाली विद्यार्थीले ब्याचलर तह पूरा गर्न नै ७०÷८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल आएर विदेशी शैक्षिक डिग्री लिन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्याचलर डिग्री प्रदान गर्ने कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू छन् । मेरो सुझाव के छ भने नेपालमा ब्याचलर गरेर मास्टर तहका लागि भने विदेश जान सकिन्छ । विदेशमा ब्याचलरभन्दा मास्टर तहको अध्ययनका लागि शुल्क सस्तो छ । ब्याचलर तह अध्ययनका लागि विदेश गएका अधिकांश विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको पाइँदैन ।
यस्ता विद्यार्थीले अध्ययनभन्दा कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । अध्ययन गरे पनि तल्लो श्रेणीका रूपमा मानिएका कलेजमा अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ । भिसा थप गर्नका लागि मात्र कलेज भर्ना हुने गरेको देखिएको छ ।
तपाईंले बेलायतमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएपछि नेपालमै ब्रिटिस डिग्री उपलब्ध गराउने गरी कलेजको स्थापना गर्नुभयो । नेपालमै अध्ययन गरेर कसरी ब्रिटिस डिग्री प्राप्त हुन सक्छ ?
मैले बेलायतमा अध्ययन गरेर डिग्री लिएकाले नेपाल र बेलायतको शिक्षा प्रणालीमा देखिएको अन्तर राम्ररी बुझ्ने मौका पाएको छु । ग्लोबल्ली भन्ने हो भने बेलायतको शैक्षिक पद्धति र प्रणाली उच्च स्तरको छ । बेलायतको राम्रो शैक्षिक प्रणालीबाट म प्रभावित भएर अध्ययन गर्न गएको हुँ ।
हामीले २०० वर्षको शैक्षिक इतिहास बोकेको बेलायतका दुईवटा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर नेपालमै कलेज स्थापना गरेका हौं । बेलायतमा रहेका यी युनिभर्सिटीको पे्रmन्चाइजमा नेपालमा अध्ययन–अध्यापन गराइरहेका छौं । पे्रmन्चाइज भनेको त्यहाँको युनिभर्सिटीको कार्यक्रम सोभैm नेपालमा प्रयोगमा ल्याउनु हो । त्यहाँको कलेजबाट सीधै सहकार्य गरेको शैक्षिक कार्यक्रम हो ।
यी विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा काम गर्न चाहन्छौं । बेलायतको शिक्षाप्रति नेपालको पहिलादेखि नै सहानुभूति, सहयोग र सद्भाव रहँदै आएको छ । नेपालसँगको नजिकको सम्बन्धका कारण उनीहरू नेपाल आएर यहाँको शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्न सहमत भएका हुन् । बेलायतको विश्वविद्यालयमा पढाइ भइरहेको कोर्स नै अहिले हामीले नेपालमा पढाइरहेका छौं । यसलाई हामी फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट भन्छौं ।
शैक्षिक शब्दावलीमा यसलाई एफिलेसन पनि भनेर बुझ्ने गर्छौं । बेलायतमा जुन हप्ता जे पढाइ हुन्छ त्यो हप्ता नेपालमा पनि त्यही पढाइ हुन्छ । यसरी यहाँ पढाइ हुने शैक्षिक सामग्री बेलायतको युनिभर्सिटीले नै पठाइदिने गरेको छ । बेलायतको पाठ्यक्रम र परीक्षण विधि नै प्रयोग गरिन्छ ।
नेपालका अरू कतिपय कलेज पनि विदेशी पाठ्यक्रम पढाइरहेका छन् । तपार्इंले पनि पढाइरहनुभएको छ भन्ने आम विद्यार्थी र अभिभावकले कसरी बुझ्ने ?
यहाँ आएर हाम्रो कलेज हेर्ने, हाम्रो संकाय विभाग प्रमुखसँग बुझ्ने, कार्यक्रम संयोजक तथा प्रिन्सिपलसँग भेट गरेर बुझ्न सकिन्छ । कलेजका सुविधाहरू हेर्ने, यसको मान्यता कति छ भनेर नेपाल सरकारलगायत बेलायती सरकारका विभिन्न अफिसियल वेबसाइटहरू रहेका छन् । युनिभर्सिटीको ¥यांकिङ कस्तो छ, सबै हेर्न सकिन्छ । हामीकहाँबाट दुईवटा ब्याच पढेर सकिसकियो ।
तत्काल अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट पनि कलेजको अवस्थाबारे बुझ्न सकिन्छ । राम्रो कलेजको आफ्नै प्रकारको हिस्ट्री भइसकेको छ । अर्को मुख्य कुरा, बेलायतको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको छ । कलेजको प्रिन्सिपल र केही लेक्चर पनि बेलायतबाटै आउनुभएको छ । यसका अतिरिक्त बेला–बेलामा विदेशबाट गेस्ट लेक्चर पनि आउने गरेका छन् । यो खालको संयोजन नेपालमा अन्य कलेजमा छैन ।
ब्रिटिस व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको राम्रो कलेज भन्नुभयो । महँगीलाई कसरी जस्टिफाइ गर्नुहुन्छ ?
महँगीलाई जस्टिफाइ गर्न हाम्रो व्यवस्थापन, भाडा र अन्य खर्चले हामी महँगै छौं । गुणस्तर दिएका छौं, महँगाइ कन्जुमरले निर्णय गर्ने कुरा हो । यसले गर्दा गुणस्तर पनि दिएका छौं, पैसा पनि लिएका छौं । विद्यार्थीले नै मैले यति पैसा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा आपंैmले निर्णय गर्ने कुरा हो । अहिले हामीसँग १ हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
उनीहरू कलेजको मूल्य देखेरै यहाँ भर्ना भएका हुन् । हामीले कसैलाई नभएको आश्वासन दिएका छैनौं । हाम्रो कलेजबाट तीनवटा ब्याच ग्रेजुएट पनि भइसकेको छ । यहाँबाट डिग्री लिएका विद्यार्थीहरू राम्रो संस्थामा काम गर्ने र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा परिचित विश्वविद्यालयमा पनि गइसकेका छन् । यसै कारण हाम्रो कलेज केही महँगो भएको हो ।
ब्रिटिस कलेजको भिजन के हो ?
हामीले शिक्षाका क्षेत्रमा गर्न खोजेको के हो भने नेपालमा भएका विद्यार्थीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने हो । अहिले कोही नेपाली विदेश गयो भने केही वर्ष त्यही हराउने गरेको छ । नेपाल र विदेशको सिस्टम आकाश–पातालको फरक हुने गरेको छ । नेपाली विद्यार्थीलाई मासमा कसरी बोल्ने, प्रस्तुतीकरण, मिटिङमा कसरी प्रस्तुत हुने केही थाहा हुँदैन ।
यसरी नेपाली विद्यार्थी विदेश गएर अरूसरह प्रतिस्पर्धा गर्न अभैm धेरै पछाडि रहेका छन् । उनीहरूलाई ग्लोबल्ली प्रतिस्पर्धी बनाउने हाम्रो भिजन छ । अर्को ठूलो भिजन भनेको नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एजुकेसन हब बनाउने भन्ने पनि छ । नेपालको मौसम अन्य देशको तुलनामा धेरै राम्रो रहेको र दक्षिण एसियामा न्युटल देश पनि मानिन्छ । नेपालको कुनै पनि छिमेकी देशसँग नराम्रो सम्बन्ध छैन ।
हाम्रा लागि सबै देश मित्र हुन् । सबै देशप्रति नेपालको समान सम्मान रहेको छ । नेपाल आउन भिसा प्रक्रिया पनि अन्य देशको तुलनामा राम्रो छ । नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक केन्द्र बनायो भने हाम्रोमा विदेशी विद्यार्थीको ओइरो लगाउन सकिन्छ । अभैm पनि ब्रिटिस कलेजमा ४५ जना भन्दा बढी विभिन्न देशका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यसरी अध्ययन गर्नेमा भारत, बंगलादेश, अफगानिस्थान, पाकिस्तान, चीन, भुटानलगायतका देशबाट अध्ययन गर्नकै लागि आएका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर मार्केटिङ नगरी यसरी विद्यार्थी आएका हुन् । अझ नेपालको अवस्थामा सुधार गरियो र मार्केटिङ गर्न सक्यो भने हजारौं विदेशी विद्यार्थी भिœयाउन सकिन्छ ।
मलेसियामा ब्रिटिस र अमेरिकन डिग्रीका लागि विदेशबाट बर्सेनि ३ लाखभन्दा बढी गैरमलेसियन त्यहाँ जाने गरेका छन् । नेपालमा अमेरिकी, ब्रिटिस र अस्ट्रेलियन डिग्रीको व्यवस्था गर्न सके मात्र भारत र चीनका विद्यार्थीले नै पुग्छ । शिक्षाको माध्यमबाट देशले लाखौं डलर आर्जनसमेत गर्न सकिन्छ भने रोजगारीसमेत वृद्धि हुन्छ ।
नेपालको परिवेशअनुसारको उच्च शिक्षाका लागि कस्ता कोर्स र कार्यक्रम राख्न सकिन्छ ?
अहिले हाम्रो कलेजमा तल्लो तहमा प्लस टुबराबरको ए लेभलदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रम छन् । यसरी नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी, ब्याचलर्स डिग्रीमा बीएस्सी कम्प्युटिङ, बीबीए र मास्टर लेभलमा ईएमपीए कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
योलगायत नेपाल सुहाउँदा चार÷पाँचवटा कोर्स थप्ने योजना छ । जस्तै मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ, एमएससी, आइटी, कन्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, डिजास्टर म्यानेजमेन्टजस्ता नेपालको परिवेश सुहाउँदो कोर्स राख्नु आवश्यक भइसकेको छ । नेपालमा आवश्यक यस्ता कोर्स पढ्न पनि विदेश जानुपरेको अवस्था छ । नेपाल जस्तो भूकम्प, बाढीपहिरो आइरहने देशमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कोर्स अति आवश्यक भइसकेको छ ।
नेपालमा अहिले धेरै आवश्यक भएको कोर्स भनेको पब्लिक हेल्थ हो । नेपालमा अभैm पनि पब्लिक हेल्थ र रोग नियन्त्रणका लागि सीमित संस्थाले मात्र काम गरिरहेका छन् । यसैले हामी बेलैमा यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । हामी नेपालमा सुहाउँदो कोर्स सुरु गर्नका लागि सरकारी प्रक्रियामा लागिसकेका छौं ।
प्रकृतिक प्रकोप सबै क्षेत्रमा आउँछ, तर यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने शिक्षाको आवश्यकता मात्र हो । नेपालमा सोअनुसारको तयारी र शिक्षाको अभावका कारण ससानो प्राकृतिक प्रकोपमा ठूलो क्षति बेहोरिरहनुपरेको छ ।
नेपाललाई एजुकेसन हबका रूपमा स्थापना गर्न सबै कलेज वा शैक्षिक संस्था एक भएर जानुपर्छ कि आ–आफ्नै तरिका जानु उपयुक्त होला ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन नेपालमा अभैm पनि २०/२५ वटा शैक्षिक संस्था खुल्नुपर्छ । यसका लागि अमेरिका, अस्टे«लिया, बेलायत वा भारतको जुनै कलेज भए पनि स्थापना भए पनि हुन्छ । यसरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कलेज स्थापना भएपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउन सक्छन् । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको हब बनाउन ब्रिटिस कलेजजस्ता प्रशस्त अन्य कलेज खुल्नुपर्छ । नेपालको कमजोर शैक्षिक नीतिले गर्दा भएका कलेज पनि बढ्न सकेका छैनन् । यसका लागि सरकारले शिक्षामा विदेशी लगानी ल्याउने किसिमको नीति बनाउनुपर्छ ।
सरकारी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न तपाईंहरूको योगदान कस्तो छ ?
नेपालमा भएका सबै क्रियाशील लेक्चरहरू ब्रिटिस शिक्षाबाट नै प्रभावित र तालिम प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त पनि अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ खालको म्यानपावर तयार भइरहेको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक दक्ष र नयाँ ऊर्जा भएका म्यानपावर उत्पादन गरिरहेका छौं । गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी हामीले राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छौं । अब हामी नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा गएर पुस्तकालय स्थापना गरेर राज्यको शिक्षा प्रणालीमा सहयोग गरिरहेका छौं । संस्थागत रूपमा बेलायतका केही विश्वविद्यालय र नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयको भाइस चान्सलरलाई शैक्षिक सहकार्य गर्ने प्रयासका लागि भेट गराएको थिएँ । यसरी दुई देशबीच सहकार्य गर्दा बेलायत नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न एकदम तयार छ । नेपालको शैक्षिक नीति अस्थिर भएका कारण फ्रीमा पाएको सुविधा पनि नेपालले लिन सकेको छैन ।
विदेशी विकास साझेदारको सहयोग पाउने सम्भावना भए नेपालका विद्यालय र कलेजका शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नेबारे योजना बनाइरहेका छौं । आर्थिक स्रोतका लागि बेलायत सरकारलगायत विभिन्न विदेशी सहयोगी संस्थाको खोजीमा रहेका छौं ।
ब्रिटिस कलेजबाट उच्च शिक्षाका लागि कति विद्यार्थी विदेश गएका छन् ।
ब्रिटिस कलेजबाट मास्टर तहको अध्ययनका लागि ७० प्रतिशतको हाराहारी विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । कलेजका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पठाउन कलेजले नै अमेरिका तथा बेलायतका टप कलेजमा सिफारिस गर्नेछ । यसका लागि विद्यार्थीले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको जस्तो सेवाशुल्क बुझाउनु पर्दैन । उनीहरुको प्रक्रिया व्यवसायिक रूपमा संस्थाले नै गर्ने गरेको छ । हामीकहाँबाट डिग्री लिएका विद्यार्थी अध्ययन अथवा रोजगारीमा लाग्ने गरेका छन् । कोही पनि काम बिना बस्ने गरेका छैनन् ।
दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रले आफ्नो देशलाई एजुकेसन हब बनाउन नसकेका बेला नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने सम्भावना छ र ?
नेपाल सानो देश भएकाले शिक्षाक्षेत्रमा केही गर्न चाहना राख्ने हो छोटो समयमा धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ । नेपालका ठूला छिमेकी देश भारत र चीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक वातावरण भिœयाउने नीतिमा अलमलिएको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले राम्रो शैक्षिक नीति ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ ।
सरकारी शिक्षा शैक्षिक हव